विश्वविद्यालय परिसरमै यौन दुर्व्यवहार- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
विश्वविद्यालय परिसरमै यौन दुर्व्यवहार
कार्तिक २८, २०७६ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा अपरिचित व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको तीनकुनेदेखि केन्द्रीय पुस्तकालयसम्म र नेपाल बैंकबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आउने बाटोमा युवाहरूले यौन दुर्व्यवहारको प्रयास गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘केटी देख्नेबित्तिकै जिस्काउने, हस्तमैथुन गर्ने युवाको समूह बढ्न थालेपछि उजुरी दिएका हौं,’ एक छात्राले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘केही साथी पटकपटक दुर्व्यवहारमा परिसकेकाले बेलैमा सचेत गराएका हौं ।’
केही महिनाअघि नेपाल बैंकबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयतर्फ जाने बाटोमा एक प्राध्यापकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । ‘साँझ–बिहान हिँड्न असुरक्षित महसुस हुन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै अप्रिय घटना नघटोस् भनेर सम्बिन्धत निकायलाई बेलैमा जानकारी गराएका हौं ।’ उजुरीमा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा सुरक्षाको वातारण कायम गर्न माग गरिएको छ । त्रिवि हातामा नचिनेका युवाको समूहले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छात्राहरूको गुनासो छ । महानगरी प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार र क्याम्पस प्रमुख कार्यालयमा विद्यार्थीले उजुरी दिएका हुन् ।
छात्राहरूले सामूहिक हस्ताक्षरसहित प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा युवाहरूले गर्ने त्यस्ता क्रियाकलाप गर्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा असुरक्षित महसुस गरेको उल्लेख छ । छात्राले विभागीय प्रमुखहरू र क्याम्पस प्रमुख कृष्ण आचार्यलाई समेत यस विषयमा ध्यानार्कषण गराइसकेको जनाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयभित्र धेरैतिर झाडी बढेको छ, मुलबाटोबाट दायाँबायाँ लाग्नेबित्तिकै केटाले साथीलाई पटकपटक जिस्काउने गरेपछि उजुरी दिएका हौं,’ अर्की छात्राले भनिन् । बिहान सबेरै क्याम्पस आउन र साँझ अबेरसम्म पढेर एक्लै घर फर्कन असहज महसुस हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘विश्वविद्यालय परिसरमा साँझबिहान एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, साँझ अबेरसम्म प्रयोगात्मक कक्षा हुँदा झाडीको बाटो फर्कन सकिँदैन,’ छात्राहरूले विभागीय प्रमुखलाई गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘हामीले विश्वविद्यालयभित्रै असुरक्षित महसुस गरेका छौं, केही अप्रिय घटना भयो भने जवाफदेही को हुने ?’
प्रिन्सिपल कार्यालयले प्रहरीसँग शान्ति सुरक्षाको विषयमा छलफल गराएको छ । छलफलका क्रममा क्याम्पसले प्रहरीसँगको सहकार्यमा चौबीसै घन्टा विश्वविद्यालय आसपासमा शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सर्तमा विश्वविद्यायलले महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । क्याम्पस प्रमुख कृष्ण आचार्यले छात्राको मागलाई मध्यनजर गरेर विश्वविद्यालयभित्र प्रहरीको गतिवधि बढाउने सहमति भएको जनाए । ‘दुर्व्यवहार हुने गरेको कुरा आएपछि क्याम्पस प्रशासन, विद्यार्थी र प्रहरी बसेर छलफल गरियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नको पहिचान गर्ने र सुरक्षित वातावरण बनाउने निर्णय गरिएको छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:३५
सरकारीले फर्काएका बिरामीले भरिन्छन् निजी अस्पताल
‘बेड पाएको भए ११ सय खर्च गरे पुग्थ्यो, निजीमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूमा प्रत्येक दिन १४ हजार खर्च भयो’
कार्तिक २८, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौँ — डेंगु ज्वरोले थलिएका अर्घाखाँचीका ५१ वर्षीय जीवनकुमार बस्याल नौ दिनअघि बसुन्धरास्थित बीपी स्मृति अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भए । वीर अस्पताल र महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालमा बेड नपाएपछि उनलाई बीपीमा लगिएको थियो ।
बुटवल अस्पतालले मिर्गौलामा समेत समस्या भएको भन्दै काठमाडौंका ‘ठूलो’ अस्पताल लैजान परिवारलाई आग्रह गरेपछि एम्बुलेन्समा ११ हजार रुपैयाँ तिरेर १८ गते उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । भेन्टिलेटर भएको आईसीयूमा उनको उपचार गर्दा दैनिक १४ हजार खर्च भएको आफन्त बाबुराम पौडेलले बताए । सरकारी अस्पतालमा बेड पाएको भए दैनिक ११ सय खर्च गरे पुग्थ्यो ।
‘पाँच लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा बेड पाइदिएको भए यत्तिको पैसा खर्च हुने थिएन । खेती गर्ने हाम्रो परिवारले थप खर्च कसरी जुटाउनु ?’ आईसीयूमा बेड खाली हुन्छ कि भनेर उनी वीर र शिक्षण अस्पताल दैनिकजसो धाउँछन् । ‘तर, कहिल्यै खाली छ भन्दैन,’ उनले भने ।
जनकपुरका १९ वर्षीय एक युवाको पनि ग्रिनसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कात्तिक १० गते विष सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेपछि उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो । धुलिखेल, हेल्पिङ ह्यान्ड, शिक्षण अस्पताल चहारे पनि बेड नपाएपछि ग्रिनसिटीमा भर्ना गरिएको उनकी दिदी गोमा मगरले बताइन् । मिर्गौला डायलसिस गर्नुपर्ने भन्दै हेल्पिङ ह्यान्डले बिरामीलाई शिक्षण अस्पताल रिफर गरेको थियो । ११ दिनेदेखि उनी ग्रिनसिटीको आईसीयूमै उपचाररत छन् । आईसीयूको चर्को खर्च जुटाउनै मगर परिवारलाई हम्मे परेको छ । ‘ऋण काढेर भए पनि उपचार खर्च जोहो गरिरहेका छौ,’ गोमाले भनिन् । ‘सरकारी अस्पतालमा चार/पाँचवटा बेड भीआईपीलाई छुट्याएर राख्छन् रे । मैले सबैतिर चहार्दा पनि पाइनँ,’ उनको गुनासो छ, ‘काठमाडौंमा कोही चिनेका छैनन्, हामीलाई किन दिन्थे र बेड ?’
सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आएका यी दुई बिरामीजस्तै धेरैजसोले बाध्यतापूर्वक निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपरेको छन् । शिक्षण अस्पताललाई विश्वास गरेर पुगेका बिरामी बेड नपाएपछि वरिपरिकै निजी अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् । ‘यहाँ छेउछाउ जति पनि अस्पताल छन्, टिचिङमा बेड नपाएका बिरामीले भरिएका छन्,’ शिक्षण अस्पतालकै एक डाक्टरले भने ।
राजधानीबाहिरका बिरामीमात्रै नभई काठमाडौं बूढानीलकण्ठकी ४५ वर्षीया कृष्णमाया श्रेष्ठले पनि शिक्षण अस्पतालमा बेड नपाएपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छन् । शिक्षण अस्पताल आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले चिरायु अस्पताल लैजान सुझाए । त्यहाँ पनि आईसीयू बेड नपाएपछि बीपी स्मृति अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । आइसियूमा दैनिक ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताइन् ।
बिरामी र उनीहरूका आफन्तले पाउने पीडा बुझ्न निजी अस्पताल पुग्दा आईसीयू र जनरल बेडमा सरकारी अस्पतालबाट फिर्ता पठाएका बिरामीले भरिएको पाइयो । चक्रपथको मेट्रो काठमाडौं अस्पताल, बसुन्धाराको चिरायु, बीपी स्मृति, ग्रिनसिटी, इसान महिला तथा बालबालिका अस्पतालका आईसीयू बेड शिक्षणबाट आएका बिरामीले भरिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालका बेडमा भने कान्ति बाल अस्पतालबाट फर्केका बिरामी भेटिए । ‘सरकारी अस्पतालको आईसीयू पाउने भनेको मन्त्री, नेता र शक्तिमा भएका ठूला व्यक्तिका आफन्तले मात्रै रहेछ,’ ग्रिनसिटीमा भेटिएका कुरुवा राजेन्द्र पराजुलीले आक्रोश व्यक्त गरे । शिक्षण अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितका ११ वटा आईसीयू बेड छन् । भेन्टिलेर नभएका थप २८ वटा बेड पनि छन् । अस्पतालमा आईसीयू चाहिने सरदर बिरामी ५० जनासम्म आउने निर्देशक डा. प्रेम खड्गाले बताए ।
आईसीयू बेड थप्नका लागि अस्पतालसँग बजेट नभएको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्‍यौं । बजेट नपाएपछि बेड थप्न सकिएन,’ खड्गाले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बजेट माग गरिरहेका छौं । आश्वासनचाहिँ पाएका छौं ।’ भूकम्पले चर्काएको पुरानो प्रशासनिक भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार ३० बेड थप्नका लागि अस्पताललाई ४० करोड बजेट आवश्यक पर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:३४
कतारबाट फर्किएका १४९ जना खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा
बैंकिङ कसुर मुद्दाका २ फरार अभियुक्त पक्राउ
‘नेवाः सम्पदा मास्न पाइँदैन’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
उपत्यकामा थपिए २८ कोरोना संक्रमित
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण स्थगित
अपडेटः सोमबार, २९ असार, २०७७ । १६ : ४५ बजे
किन सुनिँदैन दिल्लीमा नेपाल ?
अच्युत वाग्ले असार २९, २०७७
आन्तरिक नीतिको विस्तार नै परराष्ट्र नीति हो,’ उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धका जर्मन राजनेता एवम् प्रथम चान्सलर अट्टो फों बिस्मार्कले भनेका थिए । पछि, अठतीसौं अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्युबर्ट...
नेकपाको महाभारतका संकेत
गेजा शर्मा वाग्ले असार २९, २०७७
नेकपाको बहुप्रतीक्षित स्थायी समिति बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी ओलीको राजीनामा माग गरेपछि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप र...
पार्टी र सरकार नै ‘ट्रयाक आउट’
गंगा बीसी असार २९, २०७७
देशमा अहिले पनि अर्ध–लकडाउन छ । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र भने ‘अप–डाउन’ छ । खास गरी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सत्तासंघर्षले पार्टीलाई अप–डाउनको अवस्थामा...
जनता ठगिने नेटवर्किङलाई वैधता
सम्पादकीय असार २९, २०७७
सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी व्यवस्था मिलाएरै अनुमति प्रदान गरिँदा फेरि पुरानै विकृतिको पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । युनिटीलगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले गैरकानुनी...
दुर्गा कँडेल असार २८, २०७७